Daawo: Xildhibaan Canab Oo Shaacisay Arrin Ka » Axadle Wararka Maanta
Daawo: Xildhibaan Canab oo shaacisay arrin ka
Muqdisho (Axadle) – Canab Xasan Cilmi oo kamid ah mudaneyaasha baarlamaanka 10-aad ee Federaal-ka ayaa si adag uga hortimid howlgal lagu masaafurinayo dadka kasoo jeeda koonfurta oo Gobaladda Waqooyi ka bilowday magaalada Laascaanood.
Xildhibaan Canab ayaa tallaabadaas ku tilmaamtay mid Shirqool ah, oo indhaha bulshada Sooamaliyeed looga jeedinayo fashilka maamulka gooni-goosadka ah ee Gobaladda Waqooyi, sida ay hadalka u dhigtay.
“Dad ajnabi ah ma ah oo waa dad Soomaaliyeed, Axadle Gobaladda Waqooyi ee Hargeysa waxaa jooga kontan kun oo Itoobiyaan ah, maxaa dadka Soomaaliyeed ka ceyrinaya waddankii oo Oromo iyo Itoobiyaana loogu ogolaanaya caasimadii, waa arrin nasiib darro ah oo mal-dahaysa dowladnimada is-bedeshay iyo dareenka umadda Soomaaliyeed,” ayey tiri Canab Xasan Cilmi.
Sidoo kale waxay carabka ku adkeysay in midnimada Soomaaliyeed ay taallo gobolka Sool, islamarkaana ay reer Sool ka xun yihiin arrinta uu ku kacay maamulka Gobaladda Waqooyi, dal iyo dibedba.
Hadalkaan ayaa imanaya xili ay Gobaladda Waqooyi billowday musaafurinta dadka u dhashay Koonfurta Soomaaliya, kuwaasi oo ay sheegtay inay ula mid yihiin Ajaanibta dalalka kale, islamarkaana ka ay gebi ahaanba ka saari doonaan guud ahaan deegaanadooda.